‘तिमी आयौ’ भन्दै किन रुदैछिन् ‘ड्रिम गर्ल’ आश्मा ? « Ramailo छ
‘तिमी आयौ’ भन्दै किन रुदैछिन् ‘ड्रिम गर्ल’ आश्मा ?
प्रकाशित मिति : Apr 5, 2019
गायक एकदेव लिम्बूको नयँ गीत ‘तिमी आयौ’ को भिडियो सार्वजनीक गरिएको छ । सत्य घटनाबाट प्रभावीत भिनिएको गीतको भिडियो गायक लिम्बूले सोमबार आफ्नो युट्युव च्यानलमार्फत दर्शकमाझ प्रस्तुत गरेका हुन् । गीतको भिडियो हेर्नुस् :
मोडल आश्मा गिरीको एकल अभिनय रहेको भिडियोलाई दर्शकले मन पराउने विश्वास निर्माण टिमको छ । शर्मीला लिम्बूले लेखेको गीतको भिडियो बियोन्डले निर्देशन गरेका हुन् भने झोले प्रकाशनको छायांकन र सम्पादन छ । गीतमा मोडलिंग गर्ने आश्माले ‘ड्रिम गर्ल’ फिल्मबाट रजतपटमा नायिकाको रुपमा डेब्यु गरेकी हुन् ।